समाज Archives - Page2of 189 - Dna Nepal
स्याङ्जामा एम्बुलेन्स दुर्घटना, २ जनाको मृत्यु १५ भाद्र २०७७, सोमबार ०३:२७
पोखरा, भदौ १५ । स्याङ्जामा आइतबार बिहान एम्बुलेन्स दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा परी गर्भवती सहित दुई जना घाइते भएका छन् । बा २ झ ४०११ नम्बरको एम्बुलेन्स वालिङ नगरपालिका–५ माझकोटमा दुर्घटना भएको हो । दुर्घटनामा चापाकोट ९..
कास्कीमा निषेधाज्ञा खुकुलो (के खुल्छ, के खुल्दैन ?) १२ भाद्र २०७७, शुक्रबार १४:१५
पोखरा, भदौ १२ । भदौ ३ देखि जारी निषेधाज्ञा कास्कीमा केहि खुकुलो बनाईने भएको छ । जिल्ला विपद ब्यवस्थापन समितिको सुझावका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको हो । यद्यपी केहि खुकुलो गरेर निषेधाज्ञा २० गतेसम्म..
कोरोनाले मृत्यु भएका ब्यक्तिले प्रयोग गरेका सामानबाट सर्छ कोरोना ११ भाद्र २०७७, बिहीबार ०५:२०
काठमाण्डौं, भदौ ११ । मास्क लगायत संक्रमित र सक्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिले प्रयोग गरेका सामग्री घरायसी फोहोरमा मिसिएर त्यसै बाहिर जाने गरेका छन् । कतिपय स्थानमा ढल, नदी, सडक वा अस्पताल आसपास जथाभावी प्रयोग गरिएका मास्क फ्याँकिएका भेटिन्छन्..
कुलमानको नियुक्तीबारे मन्त्रीपरिषद्मा प्रश्ताव नै नलगेको उर्जामन्त्रीको भनाई ९ भाद्र २०७७, मंगलवार १३:३३
काठमाण्डौं, भदौ ९ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनः कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने बिषयमा कुने प्रश्ताव मन्त्रीपरिषद्मा नलगेको उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले बताए । सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा समेत कुलमानलाई निरन्तरता..
बागलुङमा घर पुरिँदा १ जनाको मृत्यु
पोखरा, भदौ ९ । बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकामा पहिरोले घर पुरिँदा १ जनाको मृत्यु भउको छ । स्थानीय प्रकाश परियारको घर माथीबार झरेको पहिरोमा पुरिएको हो । घर पुरिँदा परियारकी १९ बर्षीया छोरी पुजा परियारको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । अविरल..
आजदेखि लगाईएको निषेधाज्ञामा के खुल्छ, के खुल्दैन ? ८ भाद्र २०७७, सोमबार ०१:५१
पोखरा, भदौ ८ । कास्की जिल्लामा जारी निषेधाज्ञा थप ५ दिन लम्विएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा आज बसेको जिल्ला विपद व्ययवस्थापन समितिको बैठकले निषेधाज्ञाको समयावधि ५ दिन थपेको छ । भदौ १२ गते राति १२ बजेसम्मको लागि निषेधाज्ञा जारी भएको..
खोलाले बगाएर कास्कीमा एक महिलाको मृत्यु
पोखरा, भदौ ८ । कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–९ मा कस्युङ खोलाले बगाएर एक महिलाको मृत्यु भएको छ । आइतबार बिहान २४ वर्षीया दीपा गौतमलाई हरितालिका तीजको पञ्चमी नुहाउन सो खोलामा जाँदा बगाएको थियो । करिब ५ सय मिटर तल मृत अवस्थामा फेला पारिएको..
कास्कीमा ५ दिन खुकुलो निषेधाज्ञा
पोखरा, भदौ ८ । पोखरा महानगरपालिकामा कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले ५ दिनका लागि निषेधाज्ञा थप गरेको छ । पोखरा महानगरपालिकाले निषेधाज्ञाको समय भदौ १२ गते सम्म थप गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्णय पठाएको थियो..
डेढ किलो गाँजा सहित दुईजना पोखराबाट पक्राउ ६ भाद्र २०७७, शनिबार ०२:२५
पोखरा, भदौ ६ । गाँजाको कारोवार गरेको आरोपमा पोखराबाट दुईजना पक्राउ परेका छन् । पोखराका विभिन्न ठाउँमा लागूऔषध कारोकार गर्ने गरेको आरोप उनीहरुमा छ । सोही सूचनाका आधारमा प्रहरीले गरेको खानतलासी पनि उनीहरुको साथबाट गाँजा भेटिएको थियो । ईलाका..
नदीले बगाएर गण्डकीमा एकैदिन दुई बेपत्ता
पोखरा, भदौ ६ । पर्वत र लमजुङमा नदीले बगाएर दुईजना बेपत्ता भएका छन् । पर्वतको कालिगण्डकीमा विहादी गाउँपालिका ४ का ४२ बर्षीय विष्णुप्रसाद भुषाल बेपत्ता भएका छन् । उनले लगाएको टिसर्ट, कट्टु र मोवाईल नदी किनारमा भेटिएको छ । यस्तै, लमजुङको राइनास..